I-Oceania del Polonio, i-3 yokulala ye-log cabin - I-Airbnb
I-Oceania del Polonio, i-3 yokulala ye-log cabin
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguGeorgina
Ikhabhinethi ehlathini laseOceania del Polonio, iimitha ezingama-300 ukusuka elwandle.
Inamagumbi okulala amathathu (enye en-suite) kunye negumbi lokuhlambela lesibini. Ubume bendalo bukhulu, bubanzi. Ixhotyiswe kakuhle kakhulu, ilungele abo bajonge ukuphumla embindini wendalo
Le khabhathi yelog entle embindini wehlathi elihle ibekwe e-Oceania del Polonio, iibhloko ezi-3 ukusuka kumalwandle amakhulu aphakathi kweLa Pedrera kunye neCabo Polonio kunye ne-120 km ukusuka ePunta del Este.
Ngamagumbi okulala amathathu, elinye linegumbi lokuhlambela labucala, igumbi lokuhlambela lesibini, kunye nekhitshi lesitayile saseMelika elivulekele kwigumbi lokuhlala kunye negumbi lokutyela, ikhabhathi ibonelela ngayo yonke intuthuzelo efunekayo ukuze uhlale uphumle. Yonwabela umngxuma webarbecue, itafile yepikiniki, kunye neendawo zokuhlala. Relax kwi-hammocks ejikelezwe yindalo. Ukuba ujonge indawo yokuphumla, ubusuku obuzaliswe nkwenkwezi, umoya omtsha, kunye nesandi solwandle, le ndlu ipholileyo yeyona ndawo ifanelekileyo yokuya kuyo. I-Oceania del Polonio lunxweme olufihlwe kuxinzelelo lwehlabathi. Ziyi-50 kuphela ezinye izindlu ezinombane negesi. Iiselfowuni kunye ne-intanethi ehlawulwa kwangaphambili zinokusetyenziswa. Izibonelelo zingathengwa eValizas (14 km. Away) nasePedrera (27 km. Away). UAndrea unokukunika naluphi na uncedo olongezelelweyo olufunekayo ukugcina ikhabhathi icocekile kwaye ipholile.
I-Oceania del Polonio yindawo yokuphumla engaselwandle eyaziwa kancinci, enye yezona mfihlo zigcinwe kunxweme lwase-Uruguay. Lihlathi elikhulu elinokufikelela elunxwemeni, izitrato ezimdaka kunye nokufikelela ngemoto ukusuka kwiNdlela ye-10. Kukho umbane kwaye indlu inegesi kunye ne-Wi-Fi.
UAndrea nguye onyamekele indlu yethu phantse iminyaka eyi-10. Ungowasekhaya kwaye unombono obalaseleyo wokuva ngeendwendwe.